ဘီပီအိုင် ဆေးဝါးစက်ရုံမှူးအမှု ပိတ်မပိတ် နိုဝင်ဘာမှာ အမိန့်ချမယ် - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ဘီပီအိုင် ဆေးဝါးစက်ရုံမှူးအမှု ပိတ်မပိတ် နိုဝင်ဘာမှာ အမိန့်ချမယ်
ဆေးဝါးစက်ရုံမှူး ဒေါက်တာ အောင်ဇော်ကို တရားရုံးထုတ်လာစဉ်
အဂတိ လိုက်စားတယ်ဆိုတဲ့ စွဲချက်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အင်းစိန် ဘီပီအိုင် ဆေးဝါးစက်ရုံမှူးရဲ့ အမှုကို ရန်ကုန်တိုင်း တရားလွှတ်တော်မှာ အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်က စတင် စစ်ဆေးခဲ့ပြီး သူ့ရှေ့နေအဖွဲ့ က အမှုကို ပိတ်သိမ်းပေးဖို့ လျှောက်ထားရာမှာ လျှောက်ထားချက်ကို တရားရုံးက လက်ခံပြီး ကြားနာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးဝါးစက်ရုံမှူး ဒေါက်တာ အောင်ဇော်ကို အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၆ အရ အရေးယူပေးဖို့ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်က တရားစွဲခဲ့တာပါ။
သူအဂတိလိုက်စားခဲ့တယ်ဆိုပြီး ကော်မရှင်က စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်မှာ ရဲစခန်းကို တိုင်ကြားချက်မှာ ပါဝင်တဲ့အချက်တွေနဲ့ အောက်တိုဘာ ၁ ရက် အမှုကို တရားစွဲတင်ချိန်မှာ ကော်မရှင်က တင်ပြချက်တွေ အကြား ကွဲလွဲမှုတွေ ရှိနေပြီး တရားလို တယောက်တည်းက အမှုတခုတည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကွဲလွဲစွာတိုင်ကြားတာဟာ ဥပဒေအရ တရားစွဲဖို့ မညီညွတ်တဲ့ အတွက် ဒီအမှုကို ပိတ်သိမ်းပေးဖို့ တရားရုံးကို လျှောက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာအောင်ဇော်ဘက်ကနေ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ဥပဒေအကြံပေး ဦးခင်မောင်မြင့် က ဘီဘီစီကို ရှင်းပြပါတယ်။
အရည်အသွေးမမီတဲ့ ကော်စေ့ ၂၆ တန်ကို ဝယ်ယူခဲ့ရာမှာ ဒေါက်တာအောင်ဇော်က တာဝန်ရှိခဲ့တယ်၊ အဲဒီကနေ ကော်ဘူးပေါင်း ၆ သိန်း ၆ သောင်းကျော်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ဒီ ကော်ဘူးတွေဟာ ဆေးရည်တွေထည့်ဖို့ အန္တရာယ် မကင်းတာတွေ ဖြစ်လာနိုင်တာမို့ ဖျက်ဆီးရမှာဖြစ်လို့ နိုင်ငံအနေနဲ့ ဘဏ္ဍာ ကျပ်ငွေ ၄၉၉. ၇၂ သန်း ဆုံးရှုံးခဲ့တာလို့ ရဲစခန်းကို စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့မှာ ကော်မရှင်က တိုင်ခဲ့ပေမယ့် တရားရုံးကို အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့က တရားစွဲတင် တိုင်တဲ့အခါမှာတော့ ကော်ဘူးပေါင်းက ၁ သိန်း ၆ သောင်း ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရဲ့ဆုံးရှုံးငွေက ကျပ် ၁၂၃. ၅ သန်း လို့ ဖော်ပြထားတာကြောင်း ဦးခင်မောင်မြင့် က ပြောပြပါတယ်။
အမှုပိတ်သိမ်းဖို့ လျှောက်ထားချက်ကို ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော် တရားရုံးက လက်ခံလိုက်ပြီး အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မှာ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး နှစ်ဖက်လျှောက်လဲချက်တွေကို တရားရုံးက ကြားနာသွားမှာပါ။
စွပ်စွဲခံရသူဘက်က အခုလို အမှုပိတ်သိမ်းဖို့တင်ပြလာတာနဲ့ တိုင်ကြားရာမှာ ကွဲလွဲချက်တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အပေါ် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာကျော်စိုး က သူတို့မှာ အချက် အလက်တွေ ခိုင်ခိုင်မာမာရှိကြောင်းနဲ့ တရားရုံးမှာ တင်ပြသွားမယ်လို့ ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ဒီအမှုကို ပိတ် မပိတ် နိုဝင်ဘာ ၇ရက်နေ့မှာ အမိန့်ချမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒေါက်တာအောင်ဇော်ရဲ့ အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ အများပြည်သူအများအပြားက စိတ်ဝင်တစားရှိကြပြီး ဘီပီအိုင် ဆေးဝါးစက်ရုံ ဝန်ထမ်းအများအပြားကလည်း သူတို့စက်ရုံမှူးမှာ အပြစ်တစုံတရာမရှိကြောင်း ယုံကြည်ကြပါတယ်။
ဘီပီအိုငျ ဆေးဝါးစကျရုံမှူးအမှု ပိတျမပိတျ နိုဝငျဘာမှာ အမိနျ့ခမြယျ
သူအဂတိလိုကျစားခဲ့တယျဆိုပွီး ကျောမရှငျက စကျတငျဘာလ ၆ ရကျမှာ ရဲစခနျးကို တိုငျကွားခကျြမှာ ပါဝငျတဲ့အခကျြတှနေဲ့ အောကျတိုဘာ ၁ ရကျ အမှုကို တရားစှဲတငျခြိနျမှာ ကျောမရှငျက တငျပွခကျြတှေ အကွား ကှဲလှဲမှုတှေ ရှိနပွေီး တရားလို တယောကျတညျးက အမှုတခုတညျးနဲ့ပတျသကျပွီး ကှဲလှဲစှာတိုငျကွားတာဟာ ဥပဒအေရ တရားစှဲဖို့ မညီညှတျတဲ့ အတှကျ ဒီအမှုကို ပိတျသိမျးပေးဖို့ တရားရုံးကို လြှောကျခဲ့တာဖွဈကွောငျး ဒေါကျတာအောငျဇျောဘကျကနေ လိုကျပါဆောငျရှကျပေးနတေဲ့ ဥပဒအေကွံပေး ဦးခငျမောငျမွငျ့ က ဘီဘီစီကို ရှငျးပွပါတယျ။
အရညျအသှေးမမီတဲ့ ကျောစေ့ ၂၆ တနျကို ဝယျယူခဲ့ရာမှာ ဒေါကျတာအောငျဇျောက တာဝနျရှိခဲ့တယျ၊ အဲဒီကနေ ကျောဘူးပေါငျး ၆ သိနျး ၆ သောငျးကြျောထုတျလုပျခဲ့ပွီး ဒီ ကျောဘူးတှဟော ဆေးရညျတှထေညျ့ဖို့ အန်တရာယျ မကငျးတာတှေ ဖွဈလာနိုငျတာမို့ ဖကျြဆီးရမှာဖွဈလို့ နိုငျငံအနနေဲ့ ဘဏ်ဍာ ကပျြငှေ ၄၉၉. ၇၂ သနျး ဆုံးရှုံးခဲ့တာလို့ ရဲစခနျးကို စကျတငျဘာလ ၆ ရကျနမှေ့ာ ကျောမရှငျက တိုငျခဲ့ပမေယျ့ တရားရုံးကို အောကျတိုဘာလ ၁ ရကျနကေ့ တရားစှဲတငျ တိုငျတဲ့အခါမှာတော့ ကျောဘူးပေါငျးက ၁ သိနျး ၆ သောငျး ဖွဈပွီး နိုငျငံရဲ့ဆုံးရှုံးငှကေ ကပျြ ၁၂၃. ၅ သနျး လို့ ဖျောပွထားတာကွောငျး ဦးခငျမောငျမွငျ့ က ပွောပွပါတယျ။